1. ISebe leMfundo esiSiseko (ISebe i-DBE) liqulunqe izikhokelo zoviwo kwiinzame zalo zokuncedisa ootitshala nabafundi xa belungiselela iimviwo ze-NSC zango-2017.
2. Izikhokelo zoViwo lweNSC ngo-2017 (2017 NSC Examination Guidelines) azikuchaphazeli kangako ukufundisa nokufunda yaye aziyichaphazeli nekhontenti, njengoko kumiselwe kwiNkcazo yoMgaqo-nkqubo weKharityhulam noVavanyo (CAPS).
3. Ezi Zikhokelo zoViwo lweNSC zango-2017, zilungisa iimpazamo zomgaqo-nkqubo ezaziqatshelwe kwiZikhokelo zoViwo zango-2014 (2014 Examination Guidelines), zinika ingcaciso emalunga neemviwo zokugqibela ze-NSC yaye mazisetyenziswe kunye neNkcazo yoMgaqo-nkqubo weKharityhulam noVavanyo (CAPS) kwisifundo ngasinye.
4. Ziyafumaneka iZikhokelo zoViwo lweNSC zango-2017 kuzo zonke izifundo ngaphandle kwakwizifundo ze-Electrical Technology ne-Civil Technology, apho zingeyomfuneko khona.
5. Zifumaneka ezi zikhokelo kwiziko lewebhu lovavanyo eliyi-Western Cape Education Department (WCED) Further Education and Training (FET) assessment website, http://www.wcedcurriculum.westerncape.gov.za/, ngokwenza oku kulandelayo:
Klikha kwifolda engu-"2017 NSC Examination Guidelines" folder.
6. Ziyacelwa iinqununu ukuba zazise ngale ngcaciso kubo bonke ootitshala nabafundi beBakala 12 ukuze bayithathele ingqalelo.